Voalaza fa Miketrika Fampielezankevitra Fota-Mandrevo Goavana Handetehana ilay Goavana Indrindra Mpanakiana an’i Poutine i Kremlin · Global Voices teny Malagasy
Voalaza fa Miketrika Fampielezankevitra Fota-Mandrevo Goavana Handetehana ilay Goavana Indrindra Mpanakiana an'i Poutine i Kremlin
Voadika ny 19 Avrily 2017 6:29 GMT
Sary: Alexey Navalny / Instagram, namboarin'i Kevin Rothrock
Ela ny ela ka nanapaka hevitra i Kremlin ny hikarakara an'i Alexey Navalny, hoy ny loharano efatra miteny amin'ilay fahitalavitra tsy miankina Dozhd. Araka ny ambaran'ny roa amin'ireo loharano ireo (fantatra fotsiny amin'ny hoe “olona akaiky an'i Kremlin”), tsy ho ela dia hanomboka ilay fampielezankevitra hamelezana ilay mpitarika ny fanoherana ao Rosia.
Natsimbadiky ny lefitry ny lehiben'ny etamazaoron'i Poutine, Sergey Kirienko, ny toerana nisy an'i Kremlin hatramin'izay nilaza hoe tsy tena loza mitatao ho an'ny fitondràna i Navalny, araka ny nambaran'ny loharano iray izay tsy tapaka mifandray amin'ny Kirienko. Ny olan'ny fitondrana dia voalaza fa hoe mety hanembantsembana ny ho fahalanian'i Poutine indray amin'ny Marsta ho avy izao i Navalny, raha efa miandrandra “fandresena iray mahafinaritra” i Kremlin, miaraka amin'ny fandraisana anjara goavana sy tsy misy filàna famoretana ankarihary atao amin'ny mpanohitra ara-politika.
Araka ny tatitry ny Dozhd, ny tarika manokana avy amin'ny andiany mpandinika ny politika anatiny miaraka amin'i Poutine dia nametraka efitra fandrindràna ady any ivelan'i Kremlin any, mba hamorona porofo handotoana an'i Navalny. Milaza ny Dozhd fa Alexander Kharichev sy Andrei Yarin —roa amin'ireo manampahefana ambony mpandinika ny politika anatiny miaraka amin'i Poutine — no hanaraka akaiky ilay ezaka fota-mandrevo.
“Mandrakitra lahatsary ry zareo, mandefa horonantsary aparitaka be, ary miketrika lalao an-dahatsary kely mba hanaratsiana an'i Navalny. Toy ny hoe Hitler no fomba iadian-dry zareo aminy,” hoy ny loharano iray tamin'ny Dozhd.
Nolazain'ireo mpandalina politika tamin'ny Dozhd fa afaka andrandrain'ny be sy ny maro ny hahita ilay fampielezankevitra famelezana an'i Navalny ho mitovitovy endrika amin'ny famonoana ilay Praiminisitra teo aloha, Mikhail Kasyanov, izay nahilika ho tsy ara-dalàna ny firotsahany hiady seza tao amin'ny Domà-mpanjakana tamin'ny taona lasa, rehefa nalefan'ny tambajotram-pahitalavitra Rosiana ny lahatsary azo taminà fakantsary miafina, nahitàna azy nanitsakitsaka ny vadiny, izay nampihazakazaka ihany koa ny faharavàn‘ny fifanarahana demaokratikan'ireo mpanohitra ao Rosia.
Ety anaty aterineto, izay tena fototry ny fanohanana mavesatra ho an'i Navalny sy ny lazany, efa ihomehezan'ny Rosiana sahady ilay vaovao hoe miketrika “lalao an-dahatsary” i Kremlin mba hanaratsiana an'ilay mpikatroka be mpahalàla indrindra manohitra ny kolikoly ao amin'ny firenena. “Tsy andriko ny hivoahan'ilay lalao an-dahatsary izay handotoana an'i Alexey Navalny,” hoy ilay artista Anton Semakin nibitsika tamim-panesoana. “Taorian”ireo hetsi-panoherana nanoherana ny kolikoly, nanapaka hevitra i Kremlin ny hanenjika an'i Navalny, tsy noho ny kolikoly,” hoy ilay Rosiana mpanao hatsikana “Bob Farber” nivazivazy.
Raha ny voalazan'ireo loharanon'ny Dozhd, dia ireo hetsi-panoherana niely patrana nanerana ny firenena tamin'ny volana lasa iny, izay saika i Navalny tenany samirery no nitarika azy, no niteraka ity valy bontana vaovao avy amin'i Kremlin ity. Na dia solontena azo tsinotsinoavina avy amin'ny vahoaka Rosiana aza ny olona tonga, dia tsy azo lavina ny fampifandraisana ny ezak'i Navalny hamongorana ny kolikoly amin'ny hetsika iray goavana kokoa. Jereo ny tatitry ny RuNet Echo’ tamin'ny 28 Martsa momba ny “Russia's Youngster Uprising.”
Ary misy ny porofo avy aminà antontanisa izay manohana ny fisonga tsy mitsahatry ny endrika ara-politikan'i Navalny: Tany am-piandohan'ny Aprily, ny Ivontoerana Levada, masoivoho mpanao tsapa-hevitra, dia naharakitra fidinana 10% amin'ny fitokisana ny Praiminisitra Dmitry Medvedev, taorian'ny namoahan'i Navalny ny valim-panadihadiana makotroka niampanga an'i Medvedev ho manao kolikoly amin'ny sehatra rehetra.
Voafono anaty fanehoana anaty lahatsary mahafinartira sy mampiala voly, nahasarika mpijery maherin'ny 19 tapitrisa ilay filazàn'i Navalny, tao amin'ny YouTube.